नेकपाको कडी कहाँ खुस्क्यो ?
सयौं पार्टी छन्, सबैका विचार छन् । सबैका सिद्धानत छन् । ती विचार र सिद्धान्तहरुको मुख्य लक्ष्य जनतालई, जनअपेक्षालाई, राष्ट्रका लागि संवोधन गर्नका लागि हो । विचार आफैमा सबैथोक होइन, हुनु पनि हुन्न ।
विचार जनअपेक्षामा छाउनुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक एजेण्डा बन्छ, एजेण्डा योजनामा परिणत हुन्छ, कार्यक्रम बन्छ र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन राष्ट्रियनीति, संविधान र कानुनमार्फत गराउने हो । यसका लागि उच्च नैतिकता चाहिन्छ । नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा यता टाले उता प्वाल, उता टाले उता प्वाल देखिने भएकाले यी सबै चुहिने प्वालहरु बन्द गर्ने नैतिकताले हो । राजनीतिलाई जिवन्त राख्ने पनि निष्ठा र नैतिकताले नै हो । राजनीतिक विचार चम्किने र जनताले विचारलाई विश्वास गर्ने आधार पनि राजनीतिभित्रको नैतिकतालाई नै हो । यही नैतिकताका कारणले भारतले नाकावन्दी युद्ध छड्दा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली पहाड बनेर उभ्भिए । जनताले स्यावासी दिएकै हुन् । त्यही स्यावासी लिएर चुनावमा जाँदा नेकपाले ६४ प्रतिशत मत पायो । त्यसमा नेकपा माओवादी मिल्न आयो, अन्य दलहरुले समर्थन गरे र नेकपाको सरकार यतिबेला दुई तिहाइको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सरकार जनताको विचार बोकेको सरकार हो ।
नेकपाले सरकार चलाएको दुईवर्ष हुनलाग्यो । यस अवधिमा जनता सम्पूर्ण रुपमा खुशी हुनसकेनन् । जनताका असन्तुष्टिहरु घर, गाउँ, सडक, बजार जताततै पोखिन थालेका छन् । जनता र जनताको विचारलाई एजेण्डा बनाएर योजनावद्ध तरिकाले राजकाज सम्हालेको स्थितिमा नेकपा आलोचित हुनपुगेको छ । यो आलोचनालाई अन्यथा मान्नु हुन्न र आलोचनाको कडी, कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई उपचार कसरी सम्भव छ, त्यो गर्न नकेपा पछि पर्नुहुन्न ।
कहाँ खुस्कियो कडी ? जनताको पार्टी, जनताले विश्वासको मत दिएको पार्टी, जनताको आकांक्षा र अपेक्षा बोकेको पार्टीमा केही कमजोरी भएकै हो । त्यही कमजोरीप्रति जनताले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । यो जनअसंतुष्टि अविश्वासमा रुपान्तरण हुनु अघि नै नेकपाले जनविचारलाई बोकिहाल्नु जरुरी छ ।
नेकपाका चिन्तक, समर्थक, बुद्धिजीवी जो छन्, तिनले नेकपाको विचारमा उभिएको एजेण्डा, योजना, नीति, कार्यान्वयनले जनतालाई किन जोड्न सकेन र नेकपाप्रति जनाक्रोश बढेर गएको हो, डाइग्नोसिस गरेर पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव सुझाउन अबेर गर्नुहुन्न । पहिलो गएपछि त गइहाल्यो । पहिरोको जोखिम देखिएकोले त्यो जोखिम कम गर्ने, रोक्ने उपाय खोज्नु उचित होला ।